Dental Calculus - My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
လူနာတှေ သှားဆေးခနျးလာတဲ့အခါ မြားသောအားဖွငျ့ သှားတှမှော ကြောကျတှတှေရေ့လရှေိ့ပါတယျ ( အရပျအချေါ ခြိုးတတျတယျလို့ချေါကွတယျ) ဆရာဝနျက စတေနာနဲ့ ကြောကျခွဈပေးမလို့ လုပျရငျတောငျ တီကောငျဆားတှနျ့သလို တှနျ့ပွီး မခွဈခငျြဘူးဆိုပွီး အတငျးငွငျးကွပါတယျ။ သူတို့စိတျထဲမှာ သှားကြောကျတှကေ သှားကိုပိုခိုငျအောငျ အင်ျဂတမေံပေးထားသလိုထငျနတေတျကွလို့ပါ။ တဈခြို့ကလညျး ကြောကျတှမေရှိရငျ အာ့နရောမှာ ဟနတေယျထငျကွလို့ မခွဈခငျြကွပါဘူး။ ဒီကြောကျတှပေါးစပျထဲ သူ့ဘာသာနတော လူကို ဒုက်ခမပေးနိုငျဘူးလို့ ထငျရပါတယျ။ အမှနျက သူ့လောကျဒုက်ခပေးမှာ သူပဲရှိပါတယျ။
တကယျတော့ သှားကြောကျ စဖွဈလာတာ သှားခြေးဆိုတဲ့ အရာတှရေယျ တံတှေးထဲကဓာတျတဈခြို့နဲ့ပေါငျးပွီး အခြိနျအတိုငျးအတာတဈခုကွာလာတဲ့အခါသှားကြောကျစဖွဈလာပါတယျ။ အရငျကလညျး ပွောဖူးပါတယျ သှားခြေးဆိုတာ သှားကို ပုံမှနျနဲ့စနဈတကတြိုကျသူမှာတောငျ ကနျြနတေတျတာမို့ လူတိုငျး ကြောကျကတော့အနညျးနဲ့အမြား ရှိကွပါတယျ။ ဒီကြောကျတှရှေိတဲ့နရောမှာ ကွာလာရငျ ပထမ အဆငျ့အနနေဲ့ အာ့နရောလေးတှမှော နီရဲပွီး ဖောငျးနတောလေးတှရှေိပါမယျ။ နောကျပိုငျးသှားတိုကျတဲ့အခါ သှားဖုံးကနေ သှေးထှကျပွီးနာလာမယျ။ အာ့အခြိနျမှာမှ ကြောကျကိုမခွဈရငျ သှားဖုံးသားလေးတှေ နိမျ့ကလြာတာမို့ သှားက ရှညျထှကျလာတယျထငျရပါမယျ။ ဒါကို ရစေီးကမျးပွိုလိုကျတယျ ချေါပါတယျ။ ကွာလာရငျ သှားတှကေ သူ့ဘာသာ နဲ့လာပွီး ကြှတျထှကျလာပါတယျ။ ပါးစပျလညျးနံလာပါတယျ။
နောကျတဈခုက သှားကြောကျက သူ့ဘာသာ အပိုငျးလေးတှေ ကှာကသြှားတတျပါတယျ။ အာ့လိုကှာကရြငျတော့ ဘယျတော့မှ အသဈထပျမဖွဈတော့မယျ့ သှားကို ကာကှယျပေးနတေဲ့ကွှလှောလေးတှပေါ ပဲ့ပွီးပါသှားပါတယျ။
ဒီလိုဒုက်ခပေးတတျတဲ့ သှားကြောကျကို အနညျးဆုံး ၆ လ တဈခါ (သို့မဟုတျ) ၈ လ တဈခါ ကြောကျခွဈသငျ့ပါတယျ။ အာ့လိုခွဈပေးတဲ့အခါ အရငျကသှားကြောကျနရောယူထားတဲ့ နရောလေးတှမှော သှားဖုံးသားလေးတှကေ နရောပွနျယူလိုကျတာမို့ သှားကြဲတာမြိုး ဟနတောမြိုးတှဖွေဈမလာပါဘူး ( အာ့လိုနသေားတကမြဖွဈတာလေးတှဟော သှားခွဈပွီး ၃ ရကျလောကျနရေငျ သကျသာသှားတတျပါတယျ)
နရေငျလညျး ဒုက်ခပေး ကှာကရြငျလညျး ဒုက်ခပေးတတျတဲ့ သှားကြောကျလေးတှခွေဈရငျး ခံတှငျးကနျြးမာရေးကို ဂရုစိုကျကွပါစို့ ????
အသကျကွီးပမေယျ့ မပကျြစီးအောငျ ထိနျးနိုငျပါတယျ။
လူနာတွေ သွားဆေးခန်းလာတဲ့အခါ များသောအားဖြင့် သွားတွေမှာ ကျောက်တွေတွေ့ရလေ့ရှိပါတယ် ( အရပ်အခေါ် ချိုးတတ်တယ်လို့ခေါ်ကြတယ်) ဆရာဝန်က စေတနာနဲ့ ကျောက်ခြစ်ပေးမလို့ လုပ်ရင်တောင် တီကောင်ဆားတွန့်သလို တွန့်ပြီး မခြစ်ချင်ဘူးဆိုပြီး အတင်းငြင်းကြပါတယ်။ သူတို့စိတ်ထဲမှာ သွားကျောက်တွေက သွားကိုပိုခိုင်အောင် အင်္ဂတေမံပေးထားသလိုထင်နေတတ်ကြလို့ပါ။ တစ်ချို့ကလည်း ကျောက်တွေမရှိရင် အာ့နေရာမှာ ဟနေတယ်ထင်ကြလို့ မခြစ်ချင်ကြပါဘူး။ ဒီကျောက်တွေပါးစပ်ထဲ သူ့ဘာသာနေတာ လူကို ဒုက္ခမပေးနိုင်ဘူးလို့ ထင်ရပါတယ်။ အမှန်က သူ့လောက်ဒုက္ခပေးမှာ သူပဲရှိပါတယ်။
တကယ်တော့ သွားကျောက် စဖြစ်လာတာ သွားချေးဆိုတဲ့ အရာတွေရယ် တံတွေးထဲကဓာတ်တစ်ချို့နဲ့ပေါင်းပြီး အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုကြာလာတဲ့အခါသွားကျောက်စဖြစ်လာပါတယ်။ အရင်ကလည်း ပြောဖူးပါတယ် သွားချေးဆိုတာ သွားကို ပုံမှန်နဲ့စနစ်တကျတိုက်သူမှာတောင် ကျန်နေတတ်တာမို့ လူတိုင်း ကျောက်ကတော့အနည်းနဲ့အများ ရှိကြပါတယ်။ ဒီကျောက်တွေရှိတဲ့နေရာမှာ ကြာလာရင် ပထမ အဆင့်အနေနဲ့ အာ့နေရာလေးတွေမှာ နီရဲပြီး ဖောင်းနေတာလေးတွေရှိပါမယ်။ နောက်ပိုင်းသွားတိုက်တဲ့အခါ သွားဖုံးကနေ သွေးထွက်ပြီးနာလာမယ်။ အာ့အချိန်မှာမှ ကျောက်ကိုမခြစ်ရင် သွားဖုံးသားလေးတွေ နိမ့်ကျလာတာမို့ သွားက ရှည်ထွက်လာတယ်ထင်ရပါမယ်။ ဒါကို ရေစီးကမ်းပြိုလိုက်တယ် ခေါ်ပါတယ်။ ကြာလာရင် သွားတွေက သူ့ဘာသာ နဲ့လာပြီး ကျွတ်ထွက်လာပါတယ်။ ပါးစပ်လည်းနံလာပါတယ်။
နောက်တစ်ခုက သွားကျောက်က သူ့ဘာသာ အပိုင်းလေးတွေ ကွာကျသွားတတ်ပါတယ်။ အာ့လိုကွာကျရင်တော့ ဘယ်တော့မှ အသစ်ထပ်မဖြစ်တော့မယ့် သွားကို ကာကွယ်ပေးနေတဲ့ကြွေလွှာလေးတွေပါ ပဲ့ပြီးပါသွားပါတယ်။
ဒီလိုဒုက္ခပေးတတ်တဲ့ သွားကျောက်ကို အနည်းဆုံး ၆ လ တစ်ခါ (သို့မဟုတ်) ၈ လ တစ်ခါ ကျောက်ခြစ်သင့်ပါတယ်။ အာ့လိုခြစ်ပေးတဲ့အခါ အရင်ကသွားကျောက်နေရာယူထားတဲ့ နေရာလေးတွေမှာ သွားဖုံးသားလေးတွေက နေရာပြန်ယူလိုက်တာမို့ သွားကျဲတာမျိုး ဟနေတာမျိုးတွေဖြစ်မလာပါဘူး ( အာ့လိုနေသားတကျမဖြစ်တာလေးတွေဟာ သွားခြစ်ပြီး ၃ ရက်လောက်နေရင် သက်သာသွားတတ်ပါတယ်)
နေရင်လည်း ဒုက္ခပေး ကွာကျရင်လည်း ဒုက္ခပေးတတ်တဲ့ သွားကျောက်လေးတွေခြစ်ရင်း ခံတွင်းကျန်းမာရေးကို ဂရုစိုက်ကြပါစို့ ????
အသက်ကြီးပေမယ့် မပျက်စီးအောင် ထိန်းနိုင်ပါတယ်။
Return of Fertility After Contraception